हामीलाई जीवन वा काममा किन वायरलेस चार्जर चाहिन्छ?
के तपाईं लुक्दै प्लेबाट थकित हुनुहुन्छ र तपाईंको चार्ज केबलहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? के कसैले जहिले पनि तपाइँको केबलहरू लिन्छ, तर कसैलाई थाहा हुँदैन तिनीहरू कहाँ छन्? वायरलेस चार्जर यस्तो उपकरण हो जुन १ वा अधिक उपकरणहरू ताररहित चार्ज गर्न सक्दछ। तपाईंको केबल व्यवस्थापन समस्या समाधान गर्न ...
वायरलेस चार्जिंगले तपाईंलाई आफ्नो स्मार्टफोनको ब्याट्री केबल र प्लग बिना चार्ज गर्न अनुमति दिन्छ। धेरै ताररहित चार्जि devices उपकरणहरूले विशेष प्याड वा सतहको रूपमा लिन्छन् जसमा तपाईंले आफ्नो फोनलाई चार्ज गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। नयाँ स्मार्टफोनहरू एक वायरलेस चार्जिंग रिसीभर भित्र निर्मित हुन्छन्, जबकि अरूहरू ...